Horjooge Cabdi iley oo ku Guda Jira Furdaaminta kooxdii Addis ababa kaga Fashilantay. | ogaden24
Horjooge Cabdi iley oo ku Guda Jira Furdaaminta kooxdii Addis ababa kaga Fashilantay.
Madaxa maamulka Jigjiga oo maalinkii 4-aad kusugan magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itobiya ayaa xusul duub ugu Jira sidii uu u Furdaamin lahaa Horin kamida maleeshiyada Hawaarinta oo 7-dii bishani uu ka fashilmay iskuday ay kudoonayeen inay ku Af duubtaan Qaar kamida shakhsiyaadka colaadu kala dhaxayso Cabdi iley.
Maleeshiyada kuxidhan magaalada Addis ababa oo tiradoodu tahay 15-ayay maxkamad kusheegta maamulka Addis ababa dhagaysatay markii ugu Horaysay Kiiskooda 11-kii bishan, waxaana mar kale la Horgeeyay isla 17-kii bishan xiligaasi oo Horjooge Cabdi ileyna kamid ahaa dadkii xaadiray dhagaysiga Kiiska maleeshiyada.
Sida warka aanu kuhelayno Horjooge Cabdi iley ayaa u arka xukun lagu Rido maleeshiyadan mid dhiiri Galin doona kooxaha kala duwan ee kasoo Horjeeda, si taasi ayna u dhicin uuna u muujiyo inuu awood kudhex leeyahay Addis ababa ayaa laxaqiijinayaa inuu Lacag tira badan kubixinayo furdaaminta maleeshiyadaasi.
Marka laga yimaado Furdaaminta maleeshiyada lagaga dhagan yahay ayaa waxaa Horjooge Cabdi iley uu dadaal ugu jiraa sidii uu u Ogaan lahaa halka uu marayo Qorshaha is badal ee maamulka Woyanuhu wado iyo saamaynta laga Yaabo inuu kooxdiisa kuyeesho.
Isku soo wada duube safarka Cabdi iley ayaysan Qayb ka ahayn xaalada Abaareed iyo colaadeed ee kajirta wadanka Ogadenia, waxaana uu kudoodayaa inaysan deegaanka kajirin wax abaar ah balse arinku yahay Jiilaal daba dheeraaday ayna iyagu ka maamul ahaan wadaan Biyo dhaamin iyo Caws Gaadhsiin meelaha Jiilaalka kululi kajiro.